निषेधाज्ञाको अवशेष अब जोरबिजोर मात्रै ! – bampijhyala.com
Home > समाचार > निषेधाज्ञाको अवशेष अब जोरबिजोर मात्रै !
१ कार्तिक २०७७, शनिबार १२:२० bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाडौं । मध्यम तथा लामो दूरीका यातायात चल्न सुरु भएको १ महिनापछि सरकारले यात्रुबाहक सवारीसाधनमाथि लगाएको ५० प्रतिशतको सीमा हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले यसअघिको लिइँदै आएको आधा क्षमतामा मात्रै यात्रु बोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यो सँगै शनिबारदेखि सवारीसाधनले पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोकेर गुड्न थालेका छन् । यो निर्णयपछि यातायात व्यवसायीलाई निकै ठूलो राहतको अनुभूति गरेका छन् । यो निर्णयले यातायात व्यवसायीलाई मात्रै राहत भएको छैन, गाडी चढ्दा अहिले लाग्दै आएको भाडा अब ३३ प्रतिशत घटेको समेत छ । अर्थात्, सरकारले यसअघि बढाएको ५० प्रतिशत भाडावृद्धि फिर्ता भएको छ । अब पुरानै दररेटअनुसार भाडा निर्धारण हुनेछ ।
याम्पमा फेसन डिजाइनरको प्रतिस्पर्धा १ कार्तिक २०७७, शनिबार १२:२०
फवानसफ्ट १८ वर्षमा प्रवेश, एक हजार जनालाई रोजगारी दिएको दाबी १ कार्तिक २०७७, शनिबार १२:२०
‘लालुमै’ गायक सन्दीपले ल्याए ‘सान्बाबु’ १ कार्तिक २०७७, शनिबार १२:२०
लोपोन्मुख तामे सालक घोडाघोडीको गाउँमा भेटियो १ कार्तिक २०७७, शनिबार १२:२०
भीम माध्यमिक विद्यालय पूर्व विद्यार्थीहरुको भेला स्काई जोन धुम्वाराहीमा सम्पन्न सहयोगी विद्यार्थीहरुको लहर बढ्दै १ कार्तिक २०७७, शनिबार १२:२०